Khilaafka Qadar iyo Sacuudiga oo Waji Kale la soo Baxay iyo Trump oo Sacuudiga Taageeray – Radio Daljir
Juunyo 7, 2017 3:33 b 1
Sirdoonka Maraykanka oo macnaynaya khilaafka wadamada Khaliijka ayaa eedda oo dhan hadda dusha ka saaray dawladda Ruuskha, ayaga oo ku eedeeyey in sirdoonka Ruushka ama kuwo gacansaar la leh ay u dheceen Wakaaladda Wararka Qadar (WWQ) deedna ay war been-abuur ah ku dhex beereen, warkaas oo ahaa in huggamiyaha Qadar, Shiikh al-Thani, uu soodhaweynayo xiriirka Iran.
Warkaas ay qortay WWQ ayaa Maraykanku ku saleeyey khilaafka, laakiin khilaafku waa mid sannado soo jiitamayey, siina xoogaystay illaa iyo markii xukunka laga riday Xusni Mubaarak, madaxweynihii hore ee Masar.
Dawladda Qadar oo hadda xulufada Sacuudiga ay saareen xiran bad iyo berri ayaa kaashanaysa Maraykanka iyo Ingiriiska sidii looga sal gaari lahaa khilaafka.
Saas oo ay tahay, qoraal uu maanta Madaxweyne Trump saaray bartiisa Tweeter-ka ayuu ku taareegay go’aanka Sacuudiga iyo xulufadiisa, muujiyeyna in uu raalli ka yahay xiranka la saaray Qadar.
“Booqashadaydii Sacuudiga waxay ahayd mid sare waana ku faraxsanahay kulanka Boqorka iyo 50 dal, waxayna noqotay miradhal. Sacuudigu wuxuu ballanqaaday in uu dagaal adag ka galayo maalgelinta xagjiriinta iyo argagixisada, waxaana farta lagu fiiqay Qadar. Marka hadde wa kaas maanta waa biloowgii dhammaadka argagixisada,” ayuu qoray Trump.
Qoraalkiisa Trump wuxuu ku muujiyey sida uu raali uga yahay in Sacuudiga iyo xulafadiisa wadamada Khaliijku ay xiran bad iyo birri saaran Qadar.
Saas oo ay tahay ciidamada Badda ee Maraykanku waxay Qadar ku leeyahay saldhigga ugu weyn Bariga Dhexe.
Wax yar qoraalka Trump kabacdi, xafiiska Difaaca ee Pentagon-ka iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanka ayaa taageero adag la garab istaagay Qadar, xusayna in Qadar ay dagaalka lagula jiro argagixisada taageerto, loogana baahanyahay taageero dheeri ah.
Kala-hadalka Maraykanka waxaa sii xoojiyey cabashooyin isdabajoog ah oo horay dawladda Maraykanka iyo Midowga Yurub ka gudbiyeen dawladda Sacuudiga, ayaga oo ku eedaynaya in Sacuudiga uu yahay kan taageera argagixisada adduunka, 15 nin oo ka mid ahaa 19 kii nin ee 9/11 ay ayana ahaayeen Sacuudi.
Sidoo kale Maraykanka ayaa hore ugu eedeeyey in Sacuudigu taageero mabda’a Wahaabiga iyo fidinta mabaadiida Wahaabiga oo lagu fidiyo Yurub iyo Bariga Afrika, taas oo suurtagal ka dhigtay xagjirnimada sii kordhaysa ee dadka taabacsan mabaadiida Wahaabiga.
Ruushka iyo Iran ayaa ayagu hadda taageero sare la garab taagan Qadar, ayaga oo ballanqaadyo isdabajoog ah u fidiyey Qadar.
Siyaasiyiinta Soomaalida ee falaanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa ayaguna khilaafka ku macneeyey oraahda ah “god walaal ha qodin, haddii aad qoddana ha dheereyn, ku dhici doontaana mooyee!”
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17233
siciid c/risaaq 2 years
runtii waa wax laganaxo colaada kasoo cusbonatay wadamada bariga dhexe ee islaamka sacuudigu waa kukhaldanyahay ho,aankaan